Indlela yokuPaka iPumpkin - Iingcebiso kunye neengcinga
Iingcebiso kunye neengcamango zokuPenda kweePumpkins
I-autumn yilexesha apho amathanga eninzi, kwaye ekuqaleni kuka-Oktobha yithuba eligqibeleleyo lokucinga malunga nepeyinti yokubhenca amaphuphu eya kuhlala kude kube yiHalloween nangaphezulu. Isiqhamo esixhamlayo kunye nesondlo (ewe, sisiqhamo, kwaye sineenkomfa yembewu egcwele iivithamini kunye neyolisayo xa ichongiwe kwaye ihlaziywa) ivela kwiindidi ezahlukeneyo kunye nemilo kunye nemibala eyahlukileyo - imibala , i-orange (ukusuka kumlinganiselo ophezulu we-carotenoids), kodwa nayo imhlophe, iluphuzi, i-beige, ibomvu, eluhlaza, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neyimibala emininzi!
(Ngokuthakazelisayo, zonke ezi zikhona ezinomsila we-orange.)
Iipompu azikuphela kokutya okanye ubuso obunobungozi beHalloween , nangona bekunene ngokwenene. Ziluncedo nakwiimpawu ezintle kunye nezohlobiso kulo lonke ixesha kwaye zinikeza zonke iintlobo zamathuba okufunda esekelwe kulokho ukhetha ukupenda. Wena kunye nabantwana bakho okanye abafundi banokuguqula lula iipompo zibe ngumsebenzi wezobugcisa, ukuba xa unyangwa nge-sealer okanye injongo ye-varnish, inokuhlala iinyanga ezimbalwa.
Nangona sifake ngokupenda kwi- flat surface engxenyeni , ukupenda kwempuphu kukunika ithuba lokuzama ukudweba kwento eyobonakala kwinqanaba, ngokufana nesakhiwo sesithathu. Njengemivumba eboyiweyo ye-1960s eyaqhekeza imida kunye neeplani zemizobo emibini, ipeyinti yempuphu inikeza ithuba lokuhlola iindlela ezintsha zokudala.
Indlela yokukhetha nokulungiselela Iphuku lakho:
Qiniseka ukuba ukhethe ithanga elivuthiweyo. I-rind kufanele ibe yomelele kwaye ikhuni kwaye ayifanele ikhefu xa ususa isithonjana sakho kuyo. Ingqungquthela ifanele izandile umlomo xa uyibamba.
Khangela ukuba ithanga alinayo nayiphi na indawo ebolayo, izibonda, okanye iindawo ezithambileyo eziza kubonisa ukuba izicubu zomatshini zonakaliswe. Iipompo kunye nobunzima "izibhokhwe" ezithile kwiintlobo ezithile zilungile, nangona kunjalo, kwaye zingafakwa kwi-peyinti.
Qinisekisa ukuba ithanga linomthi oqinileyo kwaye aliyi kutshaya. Amapompu ngaphandle kwesiqu angakuqokelela amanzi ekudandathekeni okusele emva kwaye aqhube ukubola. (Kungenxa yoko ukuba awufanele uthabathe ithanga ngegama layo.)
Qinisekisa ukuba ithanga lihlala lithende ngendlela olifunayo kwaye ayiyi kululeka.
Khetha ithanga elilingana nesimo esifanelekileyo kwiprojekthi yakho.
Khetha ithanga elungileyo umbala weprojekthi yakho. Ngethuba unokupenda phezu kwempompo yonke, ithanga elimhlophe lisebenza kakuhle xa usebenzisa umbala wombala okhanyayo kwaye awuyi kucwangcisa ukupenda yonke ibhokisi. Kufuneka ubeke uphawu olucacileyo phambi kokuba upende, nangona kunjalo. (bona isinyathelo # 9)
Geza ithanga ngesisombululo esine-tablespoon eyodwa ye-bleach kwi-gallon yamanzi. Oku kunceda ukususa ibhaktheriya nokulibazisa ukubola, okanye ukusebenzisa iClorox Cleanup nge-bleach. Ungasusa kwakhona ithanga kunye ne-clorox ukusula okanye usana lusula, okanye uhlambe ngobumninzi ngesepha kunye namanzi kunye neengubo zokuhlamba. Bomile ngokugqibeleleyo.
Philisa ithanga kwindawo yokutshisa okanye ukukhanya kwelanga xa ukhetha kuyo kwintsimi kwaye ube nexesha. Kuthatha malunga neeveki ezimbini ukunyanga ukuze ukhule kwaye ubenzima.
Gcoba i-pumpkin nge-aerosol okanye uphawu lwe-brush ngaphambi kokupenda. (I-brush sealant efana neLiquitex Medium neVarnish (Thenga kwi-Amazon) ingcono kwimiphunga yakho kunye nemeko). Oku akuyi kunceda kuphela ukulondoloza ithanga elide kodwa liya kukunika ubuso obuhle ukuze upende. Yongeza umnqamlezo kwakhona ekugqibeleni xa uyenziwe upende. Oku kunceda ukukhusela umzobo kunye nokugcina ithanga.
Kulungile ukugcina ithanga elisezingeni elipholileyo (ama-50-60 degrees) kunye nokukhanya kwelanga, kuba ukukhanya kwelanga kuya kukhawuleza inkqubo yokubola. Amapumpu ayithandi ukuba abe maqabunga ngaphezu kwama-degrees ama-50 kwaye angaba ngumngcwabo omkhulu.
Gcina ithanga lakho lomile. Ukuba unayo ngaphandle, ngenise ukuba imvula.
Ezinye Iingcamango Zokuba Ube Paint Kwimpuphu Yakho:
Umzobo womntu owaziwayo
Bonke abantu kwintsapho yakho (ubuso obunye ngempompo)
Ukuguqula iinjenge ngokuyipenda njengezinye iziqhamo. Yenze ibonakale njenge-apula okanye ipayari.
Imizobo eqingqiweyo yokudweba, njengoLeonard da Vinci kaMena Lisa , okanye i-self-portraits kaVan Gogh, okanye u-Edvard Munch's The Scream
Umxholo, ezifana nesithuba sangaphandle okanye isibhakabhaka sasebusuku
Iipatheni, njengezona zinto ezisisiseko okanye ezinzima njengoko ufuna: imivimbo, iipolka amachashaza, i-chevron (imigqa ye-zig-zag). Funda malunga nephethini kwi -7 Imigaqo ye-Art and Design .
Iifom ezahlukeneyo zamaqabunga
Imibala yokupenda. Jonga le mizekelo yepeyinti yokupenda kwimiba eyenziwe ngabantwana abaselula.
Indawo yomhlaba okanye idolophu ejikelezweni
Izinto kunye nePaint for Painting Your pumpkin:
Iphephandaba ukugcina indawo ihlambulukile
Imiqulu yokucoca nokususa iimpazamo
Iinqwelo zamanzi zokucococa kunye nokuhlambalaza
Iibhontshisi zobukhulu bonke; i-stencil ibrashi yokumisa
Ifowuni yokudweba ngokukhawuleza yokwenza uyilo lwe-design yakho kwaye uyibeke emathangeni
Ipeyinti ye-Acrylic - yetsholongwane okanye inzima, kuxhomekeke ekubeni unokwenza umdwebo wokucoca umbhobho ebhotile, usebenzisa i-brush okanye ukubeka
Uphawu lwepeyinti lwe-Acrylic
I-Saral Transfer Paper yokudlulisa umdwebo okanye i-stencil kwi-ithinki
I-Sealant ne-varnish, njengeLiquitex Professional Gloss Varnish (Thenga kwi-Amazon)
Itheyipu yomdwebo yokubeka iiplani
Polka dot Foam Daubers (Thenga kwi-Amazon)
Izikrephu zokusika ii-designs`
Sharpies ukudweba uyilo lwakho kumpu
Ukubambelela kwimeko enjalo, kwiimpawu zefenisi okanye iifenethi
Amanqaku e-Sticky ekunqumeni imilo eyahlukileyo yokuma
Stencils. Ezi stencils ezifanayo ongazisebenzisela ukudweba ungasebenzisa kwakhona ukudweba. Yiya apha ukuze ufumane ama-stencils e-pumpkin
Ungasebenzisa kwakhona amathanga amakhoboka atholakala kwiindawo ezininzi zeendawo zobugcisa endaweni yeengxube zangempela kwaye ugcine umsebenzi wakho wezandla ngonaphakade!
UkuFunda okuPhezulu nokuBheka
Ipeyinti yokudweba (ividiyo)
Ipeyinti Iipompu / i-Nightmare Ngaphambi kweKrisimesi (ividiyo)
Ubugcisa bokuPenda kweePumpkins , uAlisa Burke
Imibala emininzi yePumpkins , uKate Smith
IYunivesithi yase-Illinois Extension, iipumpkins kunye nokunye, http://extension.illinois.edu/pumpkins/history.cfm
Vanheems, Benedict, Ukuphulukisa iipumpkins ne-Winter squash , http://www.growveg.com/growblogpost.aspx?id=263, Oktobha 12, 2012
Indlela yokusebenzisa iMasking Tape kwipayipi
I-Step-by-Step Demo: Ukudweba i-Glazes nge-Watercolor
I-Step-by-Step Demo: Udweba lweLwandle
Imibala Ephakamileyo kunye nokudibanisa imibala
Funda Indlela Yokubeka Ngokufanelekileyo Imfashini Ipeyin Insimbi
Indlela yokudweba i-Triangle ye-Theory Triangle
Ukuqonda ukuPhatha kwi-Art
Saturn e-Aries (kwiKhadi lokuzalwa)
I-5 Eras Of The Simpsons
I-Wakeboard Ukubopha Ukubanjwa
Indlela yokumisela isiVumelwano seKlasi yesiKholeji
Iimithetho ezili-10 zoLawulo lweSiteji
Ukwakha I-Technology Resume
Ziziphi ii-52 zeHukams zeGugu Gobind Singh?
Izakhono zobuGcisa bokuBala
I-Arizona State GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Funny Mole Day Jokes kunye neHumor
Iintlobo ze-Kayaking Strokes